अर्थ | Jwala Sandesh | Page 8
-तीर्थराज पाैड्याल बाणिज्य बैंकहरुले चालू आर्थिक बर्षको ९ महिना अवधिमा सरकारलाई झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले गरेको नाफाबाट आयकर वापत १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका हुन् । यो अायकर रकम बाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को ९ महिना अवधिमा तिरेको भन्दा दुई अर्ब १४ करोड अर्थात १६.८१ प्रतिशतले बढि हो । गत बर्ष बैंकहरुले १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आयकर वापत सरकारलाई बुझाएका थिए । सबैभन्दा धेरै [...]
दैलेख बैशाष १२- दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले कर्णाली प्रदेशकै पहिलो बेरोजगार युवाहरुको रोजगार/स्वरोजगार मेला संचालन गर्ने भएको छ । वेरोजगारी समस्या हल गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिका भरका वेरोजगार युवाहरुको उपस्थितिमा मेला संचालन गर्न लागेको हो । मेलामा वेरोजगार बस्नुको कारणबारे स्पष्ट हुनेगरी युवालाई फर्म भर्न लगाइनेछ । फर्ममा वेरोजगार बस्नुको कारण के हो ? के काम गर्न सक्षम हो ? कती योग्यता छ ? लगायत कुराहरु समेटिएको हुनेछ भने त्यस फर्म भरे पश्चात [...]